Ixabiso lelokwenyani, umfanekiso wokwenyani uthathiwe, iseti iyonke isetyenziswa ngokwahlukeneyo, kwaye umkhweli ngamnye ubulawa zintsholongwane.Uqikelelo lweHD [Almond] Renmin North Road Metro|Longhu Shangcheng|North Railway Station|Password Lock| - I-Airbnb
Ixabiso lelokwenyani, umfanekiso wokwenyani uthathiwe, iseti iyonke isetyenziswa ngokwahlukeneyo, kwaye umkhweli ngamnye ubulawa zintsholongwane.Uqikelelo lweHD [Almond] Renmin North Road Metro|Longhu Shangcheng|North Railway Station|Password Lock|
Izimvo eziyi-2 223
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe ongu莓
Molo iindwendwe ezithandekayo, ukuze zisebenzisane ekuthinteleni nasekulawuleni ubhubhane, okwangoku, iGuangdong, iJilin, iShanghai, kunye neekhowudi zetikiti zeenkwenkwezi azinakukwazi ukwamkela iindwendwe. Kuthatha iiyure eziyi-48 zokuvavanya i-nucleic acid ukuze iindwendwe ezivela ngaphandle kweli phondo zize eRong, kwaye kufuneka zivavanye ii-nucleic acid kwiiyure eziyi-24 emva kokubhalisa xa zifika!
Indlu ikwindawo entle:
Indlu yethu iseduze ne-Renmin Road North Station.
Kwimizuzu eyi-10 xa uhamba ngeenyawo ukusuka "eLonghuangcheng Sky Street, eGoldenylvania Wanda District".
Imizi emine engaphantsi komhlaba ukuya eChunxi Road nase
Ukuma okuyi-1 ukuya kwisikhululo sikaloliwe saseNorth.
Uhamba imizuzu eyi-2 ukusuka Kwilinki Yesikhululo Seenqwelo-moya ukuya
ukufikelela lula kwiindawo ezahlukeneyo ezinomtsalane.
iprojekta ye-HD, i-WiFi, umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu, ifriji, umatshini wokuhlamba impahla, into yokufudumeza amanzi yombane, indawo yokungena emnyango, iketile yombane, isofa, into yokuxhoma impahla.
Izinto ezinokusetyenziswa kwigumbi lokuhlambela:
Iphepha『 langasese, ishawa, isinki, ibrashi yamazinyo elahlwayo, itawuli, itawuli yokuhlamba, ikepsi yeshawa, isixhobo sokomisa iinwele, ishampu, i-shower gel, ikomityi yomlomo, ii-slippers. 』
Umnyango uxhotyiswe ngekhowudi ephucukileyo yokutshixa ukuze kungeneke lula. Ipaki yemoto etsalwayo kunye nejimu yasimahla ziyafumaneka kumgangatho osezantsi.
Sinemigangatho engqongqo yococeko. Siqesha ibhinqa elicocayo eliziingcali ukuba licoce lize libulale iintsholongwane kwigumbi, ukuze uhlale unoxolo lwengqondo.
Sinento yonke oyifunayo ukuze uzive ushushu kwaye uthe zava ekhayeni lakho.
Uluhlu olujongileyo lunegumbi lokulala elinye kunye negumbi lokuhlambela elinye.Sinebhedi enkulu eyi-1.5x2m ekwaziyo ukuhlalisa abantu aba-2. Indawo yepropathi inenzuzo kakhulu: indlu yethu ikufutshane nesikhululo sikaloliwe "Renmin North Road", ngaphakathi kwemizuzu eyi-10 yokuhamba "Longhu Shangcheng Tianjie, Jinniu Wanda District Commercial", kunye nokuhamba imizuzu emibini ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya. umgca okhethekileyo.
4.93 out of 5 stars from 2223 reviews
4.93 · Izimvo eziyi-2 223
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi2 223
Umnyango wendlu yi-Beicheng No. IWanda Plaza ikumgama weemitha ezingama-800 kunye nohambo lwemizuzu eli-12. Izibhedlele ezikufutshane siSichuan Forestry Central Hospital kunye ne Bayi Orthopedic Hospital, zombini zikude nge 300 yeemitha. Ubomi obujikelezileyo bunomoya owomeleleyo, olona khetho lwakho lohambo olukumgangatho ophezulu ~
Umbuki zindwendwe ngu- 莓
Izimvo eziyi-6 565
Molo lundwendwe oluthandekayo, ukuze sisebenzisane ekuthinteleni nasekulawuleni ubhubhane, okwangoku, iGuangdong, iJilin, iShanghai kunye neekhowudi zohambo eziphawulekayo azikwazi ukwamkela iindwendwe. Kuthatha iiyure eziyi-48 ukuba iindwendwe ezivela ngaphandle kweli phondo ziye e-Rong ukuze zivavanywe i-nucleic acid. Emva kokubhalisa xa ufika kufuneka wenze uvavanyo lwe-nucleic acid kangangeeyure ezingama-24. Enkosi ngokusebenzisana nokuqonda kwakho.
Molo lundwendwe oluthandekayo, ukuze sisebenzisane ekuthinteleni nasekulawuleni ubhubhane, okwangoku, iGuangdong, iJilin, iShanghai kunye neekhowudi zohambo eziphawulekayo azikwazi…